UPalacios uphawula ngokuqhathwa kwabo neSuperSport | News24
UPalacios uphawula ngokuqhathwa kwabo neSuperSport
Johannesburg - Ibamba lomqeqeshi we-Orlando Pirates u-Augusto Palacios ukwamukele ukuqhathwa kwabo neSuperSport United emdlalweni owandulela owamanqamu eTelkom Knockout, kodwa wathi ngeke kube owamagqubu.
IBhakabhaka lisazikhotha amanxeba kulandela ukuthola isibhaxu sika-6-1 lidlala ne-SSU koweligi.
UPalacios uthi iqembu lakhe ngeke liye kulo mdlalo lifuna ukuziphindisela, wathi bazogxila ekutheni bafune isicoco kule sizini.
"Umdlalo wenkomishi ungumdlalo wenkomishi,” kusho uPalacios kwiKickOff.com.
OLUNYE UDABA: Kuzomele sikhohlwe okwedlule
Uthe wonke amaqembu ebebengaqhathwa nawo anzima.
"Ngeke sidlalele ukuziphindiselela kodwa sizobe sidlalela ukufinyelela kowamanqamu. Ukuziphindiselela akukho semqondweni.”
Imidlalo eyandulela eyamanqamu kulindeleke idlalwe ngempelasonto yangomhlaka-26 no-27 Novemba.